Eji calcium nitrate n'ime ubi - Fatịlaịza - 2020
A na-ejikarị nitrate calcium na-arụ ọrụ n'ugbo dị ka uwe elu osisi, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi a kụrụ. N'isiokwu a, anyị ga-atụle àgwà bara uru nke calcium nitrate, yana tụlee ntụziaka dị mkpirikpi banyere ojiji ya.
Kedu calcium nitrate maka?
N'ihi na nri mgbọrọgwụ
Maka ngwa foliar
Otu esi eme onwe gi
Calcium nitrate: fatịlaịza mejupụtara
Dịka akụkụ nke fatịlaịza ahụ bụ calcium, nke nwere ihe dị ka pasent 19 nke ngụkọta ihe niile. Nakwa na ụdị nitrate bụ nitrogen - banyere 13-16%. A na-ere ọgwụ a n'ụdị kristal ọcha ma ọ bụ granul.
Ọ dị ezigbo mma na mmiri, nwere nnukwu hygroscopicity. Ngwunye dị mma bụ na a pụrụ ịnọgide na-echekwa ngwaahịa nke ngwaahịa a ogologo oge ma ọ bụrụ na echekwara ya na nkwakọba akara ya.
Aha "saltpeter" si na Latin. Ọ gụnyere okwu "sal" (nnu) na "nitri" (alkali).
Ị ma? Ngwunye a, n'etiti ihe ndị ọzọ, na-egbochi nkwụsị nke mgbakwunye, na-echebe ihe owuwu ụlọ site na mmetụta nke obere okpomọkụ, eji dị ka ihe dị mkpa nke ihe mgbawa.
O nwere mmetụta dị mma na osisi. Mbụ, ọ nwere ike ịmepụta usoro nke photosynthesis, nke na-egosipụta ngwa ngwa banyere ọdịdị obodo dum.
Ọzọkwa, ngwaahịa a na-enyere aka na-eto eto akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma na-eme ka uto nke osisi ahụ dịkwuo ogologo, ka e wee nweta ihe ubi ahụ na mbụ. Saltpeter na-arụ ọrụ na usoro mgbọrọgwụ, na-akwalite mmepe ya. Na-etinye ya na osisi, ị nwere ike hụ na ha ngwa ngwa germination.
Tụkwasị na nke a, ngwaahịa calcium a nwere ike ime ka osisi dịkwuo ọgwụ na ọrịa na pests. Igha ubi na ubi a kụrụ n'ubi na-esiwanye ike na mgbanwe nke ikuku ikuku.
Inye mkpụrụ osisi na-abawanye mma, ndụ ha ga-adịkwa ogologo. Dị ka ihe ndị kwuru si kwuo, ekele maka nnu nnu, ọ ga-ekwe omume iwelie mkpụrụ site na 10-15%.
Ị ma? A na-eji calcium nitrate ọ bụghị nanị dị ka fatịlaịza maka osisi. Ọ bụkwa ihe mgbakwunye maka ihe, nke nwere ike ime ka ike ya dịwanye elu.
Otú ọ dị, e nwere nzaghachi na ọgwụ a. Ọ bụrụ na ejiri ya na-ezighi ezi, ọ nwere ike inwe mmetụta ọjọọ na usoro mgbọrọgwụ osisi ahụ. Na nke a, ọ dị ezigbo mkpa ịgbaso ntinye na oge nke ịbata ntinye n'ime ala, nke ntụziaka na-eduzi.
Dịka ntụziaka maka iji mee ihe, tinye fatịlaịza nwere calcium nitrate na ya, ọ dị mkpa naanị n'oge oge opupu ihe ubi mgbe a na-egwu egwu. A naghị atụ aro ya iji ngwaahịa ahụ n'oge mgbụsị akwụkwọ, ebe a na-atụle ya na ọ gaghị enwe mmetụta na ya.
Nke a dabeere n'eziokwu bụ na nitrogen, nke bụ akụkụ nke nitrate, mgbe a na-agbaze mmiri na-agbaze mmiri, na-ahapụ nanị calcium n'ebe ahụ. Nanị ndị a ga - abara mkpụrụ osisi ahụ uru, ma ha nwekwara ike inwe mmetụta ọjọọ.
Ọ dị mkpa! Ụzọ kachasị mfe iji salite na granulu. Ọ dị mfe itinye na ala ma na-etinye obere mmiri.
Saltpeter dị ka fatịlaịza a na-eji eme ihe dị mfe ma kwụ ọtọ. Uwe elu nwere ike ịbụ mgbọrọgwụ na foliar.
Na-atọ ụtọ nke calcium nitrate kabeeji. Ma e nwere isi ihe dị mkpa. Calcium nitrate maka seedlings bara uru, ị nwere ike ịzụta ya, na-agbakwunye ngwọta n'okpuru mgbọrọgwụ. Ngwọta n'onwe ya dị mfe ịkwadebe, ọ dị mkpa ka ị tụgharịa 2 g nke nnu na 1 liter mmiri.
Mana obula okenye na-echegbu onwe ya, ebe ọ maara na ihe ọkụkụ a adịghị amasị ala acidic, ọ dị mkpa iji nweta nkwekọrịta n'ụzọ dị iche. Ndị ọkachamara ahụmahụ mere ka a mata ajụjụ a n'ụzọ dị otú a: ha na-ewepụta ọka fatịlaịza n'oge ọ na-egwu ala, ma banye n'ime oghere maka kabeeji (1 tsp).
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ dị mkpa ka ị fesa ọgwụ ahụ na ụwa oyi dị ala ma belata mgbọrọgwụ osisi n'ebe ahụ. N'ihi ya, kabeeji na-arụsi ọrụ ike, na-emepụta epupụta na, ọ dịghị ihe ọzọ, adịghị arịa ọrịa. Banyere ubi na ubi ubi ndị ọzọ, a ghaghị itinye ụdị fatịlaịza a n'ụdị ihe ngwọta mmiri. Ngwakọta dị iche iche dị ka ndị a:
Strawberries A na-eji akwa mgbakwasa n'elu tupu oge okooko. Ọ ga-ewe 10 lita mmiri 25 g nke nnu.
Akwukwo nri ndi anabatare calcium. Gwa ọgwụ tupu ị kpaa, ihe dị ka 20 g na-agbaze n'ime lita 10.
Mkpụrụ osisi, osisi. Nri tupu budding. Ikwesiri iri 25-30 g nke nnu saltpeter kwa 10 lita mmiri.
Ọ dị mkpa! Calcium nitrate dị mma na ọtụtụ ụdị nri ma e wezụga nke superphosphate dị mfe. A machibidoro ha ọnụ.
Ngwa foliar bụ ịgha mkpụrụ nke ihe ọkụkụ. Ọ na-eme ka nke ọma dị ka prophylactic megide wilting nke akụkụ ndụ akwụkwọ ndụ, rotting nke mgbọrọgwụ na mkpụrụ osisi.
Ụdị nri dị otú ahụ bara uru maka cucumbers. Na-agba ha maka oge mbụ mgbe akwụkwọ nke atọ ga-apụta na ị ga. Mgbe nke ahụ gasị, na-elele oge nke ụbọchị 10, na-emegharị usoro n'ihu nhazi nke mkpụrụ osisi. N'ihi foliar nri cucumbers mkpa 2 g nke calcium nitrate na 1 liter mmiri.
Maka otu ihe ahụ, calcium nitrate bụ ewu ewu maka ngwa tomato. A ghaghị ime nke a ụbọchị 7 mgbe ọ na-akụ mkpụrụ n'ala n'ala. Ọgwụ ga-echebe nke ọma na-eto eto growths si apical ire ere, slugs, akọrọ na thrips. Eziokwu na-adọrọ mmasị bụ na ngwọta nnu calcium nwere mmetụta nke nchịkọta na nkwụsị. Nke a pụtara na ọbụlagodi mgbe a kwụsịrị nri, bushes ga-anọgide na-enwe nsogbu, na tomato ga-anọgide na-echebe ya pụọ ​​na nchara nchara.
Iji kwadebe ngwọta ọrụ dị irè, ọ dị mkpa ka iwere 25 g nke ngwaahịa granulated ma gbasasịa ya na liter 1 mmiri. Ọnụ ọgụgụ dị ntakịrị ọnụ ga-abụ ndị a:
Akwukwo nri na beri. A ga-eji ihe dị ka 1-1.5 lita nke ngwọta mee ihe kwa square mita.
Okooko osisi Ọ ga-eburu 1.5 lita nke ngwakọta mmiri.
Osisi. Iji mezie otu ohia, i kwesiri igbadebe 1.5-2 lita nke mmiri mmiri.
Ọ dị mkpa! A na-enye usoro ọgwụgwọ naanị dịka onye nduzi. Jide n'aka na ị gụọ ntụziaka ndị ahụ tupu ịmalite ịmepụta ihe ọkụkụ.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nwere ike ịzụta ngwugwu na-eme ka ọ bụrụ ụlọ ahịa pụrụ iche, ị nwere ike ịme onwe gị. Maka nke a, ammonium nitrate na lime hydrated ga-adị mkpa. Ihe ndi nwere ike - pan nke aluminom, olu nke 3 lita, brik, ahihia, mmiri.
A ga-echekwa aka na ikuku na gloves na respirator. N'oge usoro nri, a ga-ewepụ ísì ísì ọjọọ, ya mere, a ghaghị ime usoro dị otú ahụ nanị n'èzí oghere nke dị mma. Kasị mma n'ụlọ.
Mbụ ị ga-achọ ịme obere brzier nke brik. Ịtọ nkụ, ị ga-eme ọkụ. Na ite ị chọrọ wunye 0,5 lita mmiri, wukwasi 300 g nke ammonium nitrate ya. Tinye ite (na brik) na ọkụ ọkụ nke ọma wee weta ngwakọta na obụpde. Mgbe mmiri na-agbọ, ị nwere ike iji nwayọọ nwayọọ tinye obụp. Ọ dị mkpa ịkekọrịta iwebata lime na nkeji, oge ọ bụla wụsara ihe dị ka 140 g nke ihe a. Usoro dum na-ewe ihe dịka minit 25-30. Rịba ama na nitrate dị njikere, ọ ga-ekwe omume site n'eziokwu ahụ na ngwakọta agaghịzi enye isi ísì nke amonia. Enwere ike ịgbanyụ ọkụ ọkụ ahụ.
Dịka fatịlaịza ị nwere ike iji ụdị nri dị iche iche: ịnyịnya, ehi, atụrụ, oke bekee, ezi.
Mgbe obere oge gachara, ọ ga-abanye na pan. Mgbe ahụ, ịkwesịrị iburu akpa ọzọ ma gbanye n'ime ya site na mmiri dị ọcha mbụ ahụ, na-ahapụ mmiri mmiri na-adịghị na ala.
A na-akpọ mmiri a ka ọ bụrụ nne ngwọta nke calcium nitrate. Naanị ihe ngwọta a ga-etinye na ala ma ọ bụ tinye ya na nzube nke ịkụcha.
Calcium nitrate aghọwo onye inyeaka a pụrụ ịdabere na ya nye ndị ọrụ ugbo. Ọ na-alụ ọgụ nke ọma megide ọrịa ndị nwere ike ime n'ihi enwekwaghị calcium. Maka mmefu ego, ha ga-eme onwe ha ka ha mara na oge mbụ.
Ezi ntụziaka maka kọlịflawa maka oyi. Uru na nsogbu nke akwụkwọ nri na nhọrọ maka ijere efere
Geranium epupụta gbanwee edo edo site n'ọnụ ya, buds na-akpọnwụ: gịnị kpatara ifuru na ihe ị ga-eme?